राष्ट्र मक्काउने धमिराको यस्तो रँजाई कहिलेसम्म ? - MONGOL KHABAR
१९५९ मा गोरखाका सोझा दयालु स्वभावका धनी घले राजालाई चतुर षड्यन्त्रकारी द्रव्य शाहले ठुन्काउदै गोरखा कब्जा सँगै लम्जुङ हुँदै पृथ्वी नारायण शाहका बाबु नरभुपाल शाहले नुवाकोट आक्रमण शुरु गरे सफल भएनन् । पछि त्यो अधुरो बाबुको सपना पुरा गर्न दोस्रो पटक पृथ्वी नारायण शाहले आक्रमण गरे हातमा लाग्यो शुन्य भएपछि तेस्रो पटक मात्र नुवाकोट जीते । त्यहाँबाट मंगोल मास्ने अभियान चलाएका पृथ्वी नारायण शाहकाका पछि १२ जना गद्धिमा बसेर मंगोलहरुलाई लुटे, कुटे र जंगली बनाइ दिएको इतिहास साँची छ ।
सन् १९५१ देखि १९६० सम्ममा बाहुनक्षेत्रीले पालै पालो मोज गरे । ९ वर्षको अवधिमा ८ जना प्रधानमन्त्री बने । सबै कोइराला बाहुनको रँजाइ चल्यो । नेपाली कंग्रेस जो सामन्ती बाहुनहरुको पार्टी बन्न पुगेको छ यस समय । १९४६ तिर कंग्रेसको स्थापना भारतमा भएको हो र विपी पनि भारतमा नै जम्मिएका हुन । सन् १९६० मा पञ्चायत लागू भयो र १९९० सम्म ३० वर्ष राज गरे श्री ५, श्री ३ र श्री ६ बाहुन क्षेत्रीहरुले । त्यो अवधिलाई जहाँनिया राणा शासन पछिको सबै भन्दा अध्यारो मानिन्छ । जतिवेला नेपालमा मंगोलहरु माथिको ज्यादति चरम उत्कर्षमा पु¥याइयो । एक धर्म, एक भाषा र एक भेषको नीति लागु गरे । मानव अधिकारको हनन् मात्र भएन मानव अधिकारको वर्खिलापमा बाहुनक्षेत्री श्री ५ राजाले गर्न नहुने सबै खाले काम ग¥यो । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरे । यो ज्यादती धेरै लामो समय टिक्न सकेन । १९९० मा बहुदल फर्कियो ।
पञ्चायतकालमा पनि बाहुन क्षेत्रीहरु नै माथिल्लो ओहोदा रहे । ३० वर्षे अवधिमा १५ जना प्रधानमन्त्री बने त्यहि हुलमा एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ वाहेक सबै बाहुन क्षेत्री नै थिए । त्यतिवेला राजालाई विस्णुको अवतार भन्दै जनतालाई पुज्न लगाइयो । तर विष्णु अवतारको अवतारको परिवारमा कहिल्यै नसोचिएको घट्ना घट्न पुग्यो । राजा भएपछि क्षेत्रीहरु बढि विश्वास पात्र हुने हँदा सूर्यवहादुर थापाले ३ पटक, तुल्सी गिरीले ३, कृति निधि विष्टले ३, लोकेन्द्रवहादुर चन्दले २ पटक नगेन्द्र रिजाल २, गेहेन्द्र राज भण्डारी र मरिचमान एक–एक पटक प्रधानमन्त्री पड्काए ।
सन् १५५९ देखि २०१६ सम्मको अवधिमा बाहुन क्षेत्री र तिनीहरुको मेरुदण्ड राजतन्त्र अनि मोजतन्त्र बनाएको लोकतन्त्रमा गरेर करिब ४१४ वर्ष सत्तामा रहेका छन् भने ४ वर्ष मात्र मरिचमानसिंह श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री चलाएको इतिहास साक्षी छ । लोकतन्त्र स्थापना भएपछिको समावेशी नारा दिने बाहुन क्षेत्रीको असली व्यवहारलाई संसारले हेरि नै रहेको छ र नेपालका जनताले पनि देखेका छन् । के यो मुलुक बाहुन क्षेत्री र राजाहरुको मात्रै पेवा हो ? यहाँ प्रश्न तेर्सिएको छ । एउटा थपना जस्तो पदमा अल्झ्याएर देशको तालाचावी चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको खल्तीमा राख्ने अधिकार मंगोलहरुले दिनु हुन्न भन्ने चेतनाको ढकन खोल्नु जरुरी छ । लेखकको आफ्नो विचार